मनपर्ने सेलिब्रेटी भेट्ने धोको पूरा गर्न खोज्दा फ्यानले गुमाए ६० लाख ! - Everest Dainik - News from Nepal
मनपर्ने सेलिब्रेटी भेट्ने धोको पूरा गर्न खोज्दा फ्यानले गुमाए ६० लाख !
काठमाडौं, साउन १७ । मानिसले मनको रहर पूरा गर्न के सम्म गर्दैन ? हरेक कुराको लागि तयार हुन्छन् । यसैको एक उदाहरण भारतमा भएको एउटा घटनालाई लिन सकिन्छ ।
एक व्यक्ति आफ्नो मन पर्ने सेलिब्रेटी भेट्ने रहर पूरा गर्न खोज्दा ठगिएका छन् । एकजना व्यक्ति जसको परिचय खुलाइएको छैन, बलिउड हिरोइन काजल अग्रवालका डाइहार्ट फ्यान रहेछन् । उनको यही फाइदा केही व्यक्तिले उठाएका हुन् । धोखाधडी गर्नेहरुले ती फ्यानबाट ६० लाख ठगेको एक अनलाइनले जनाएको छ ।
समाचारअनुसार रामनाथपुरका ती फ्यानले काजलसँग प्रत्यक्ष भेट्न पाउने आशामा ती व्यक्तिलाई ६० लाख भारु बुझाएका थिए । सुरुमा ५० हजार भारु तिरेका उनले पटक पटक गरी ६० लाख भारु ती व्यक्तिलाई बुझाएको बताइएको छ ।
यतिले मात्रै घटना टुंगिएन । उनीहरुले ती व्यक्तिलाई विभिन्न अब्सिन फोटोहरु अनलाइनमा लिक गरिदिने भन्दै डर देखाएका थिए । धेरैभन्दा धेरै पैसा असुलिन थालेपछि ती फ्यान डरले कोलकातामा लुकेर बसेका थिए। त्यसपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रहरीले अहिले एक निर्मातालाई जेलचलान गरेको छ । उनी श्रवणकुमार रहेको बताइएको छ।
याे पनि पढ्नुस बिहेअघि नै बच्चा जन्माउँदै यि बलिउड नायिका !